WIRED xigta 2015 Masters of Magic
Isticmaalka falsafadda fikirka xun, Walter Rolfo wuxuu soo bandhigayaa xeeladaha si loo helo natiijooyin aan macquul ahayn marxalad kasta oo nolosheena ah. Maskaxdu waa mashiinka ugu fiican oo leh waxyaabo aan la ogaan karin.
Just sixir, farshaxanka ugu dahsoon, noqdaan kuwa ugu horumarsan oo waa furaha si aad u bilowdo xeeladaha fikirka si loo gaaro ujeeddooyinka loo arkaa wax aan macquul aheyn. The saaxir-ganacsadaha Walter Rolfo ayaa sheegay in inta lagu guda jiro banki Next Fest sida looga fikiro sida gargaarka saaxir ah oo u noqon hal-abuurka iyo sida sixir noqon kartaa wajiyo cusub ee dhismaha kooxda iyo tababarka maamulayaasha iyo shirkadaha.
U maareeyayWalter Rolfo